संसारकै अनौठो लाग्ने गाउँ , जहाँ पुरुष प्रवेश निषेध छ !
July 1, 2020 chothale
काठमाडौं । उत्तर केन्याको उमेजा नामको एक गाउँमा पुरुषलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । महिला मात्र बसोबास गर्ने उमेजामा पुरुष जान पाउँदैनन् । सन् १९९० मा १५ जना पीडित महिलाबाट बसाइएको उक्त बस्तीमा पछि बालविवाह, घरेलु हिंसा आदीबाट पीडित महिला पनि बसोबास गर्न थालेका छन् । गाउँमा महिलाले खाना, कपडा र घरका लागि नियमित खर्च आफैँ जुटाउने गर्छन् । उमेजमा पर्यटकहरु पनि कम खर्चमा नै भ्रमण गर्न सक्ने व्यवस्था महिलाले मिलाएका छन् । महिलाको हक र अधिकारका लागि लड्ने क्रममा पुरुषबाट पिटिएकी रेबेका लोलोसोलीले शुरुमा बस्ती स्थापना गरेकी हुन् ।…
राेचक, समाचाररोचक, रोचक कुराहरुLeaveacomment
हरेक दिन अलिकति सासुलाइ बिष खुवाउने यी बुहारी !
काठमान्डौ । आरती नाम भएकी एउटी युवतीको बिहे भयो । बिहेपछि आरती आफ्नो पति अनि सासू–ससुराका साथमा पतिघरमा बस्न थालिन् । केही दिनमै उनलाई महसुस भयो उनकी सासूसँग उनको सम्बन्ध सहज हुनेवाला छैन । सासूका साथमा बसेर बाँकी जीवन बाँच्न उनलाई असह्य कष्टकर हुने देखियो । सासू पुरानो विचारकी,बुहारी आधुनिक सोचाइकी । कुरा कसरी मिल्नु र ? दिनहुँ भनाभन हुन थालिहाल्यो । दिन बिते,महिना बिते र वर्ष पनि बित्यो । न त सासूले बुहारीका विषयमा तीता टीकाटिप्पणी गर्न छाडिन् न त बुहारीले मुख फर्काउन । समस्या झन्भन्दा झन् खराब हुँदै…
राेचक, समाचारबुहारी, सासुLeaveacomment
July 1, 2020 November 2, 2020 chothale
काठमाडौं । अहिले अस्ट्रेलियामा बस्ने एक नेपाली युवती चर्चामा छिन् । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा पसलमा बसेकी ती युवतीले पसल लुट्न आएका एक लुटेरालाई चक्कु लिएर दौडाइन् । पवित्रा कार्कीले लुटेरालाई चक्कुले तर्साएर भगाएको घटनाको सीसीटिभी फुटेज सार्वजनिक भएसँगै उनको चर्चा बढेको छ । ‘ऊ ढोकामा आयो अनि पैसा माग्यो । म डराएँ । मैले उसको कुरा बुझिन र के भन्न खोजेको भनेर सोधें । उसले पैसा देउ, पैसा देउ भन्यो’ पवित्राले अस्ट्रेलियाको सेभेन न्यूजसँग कुरा गर्दै भनिन् ‘मैले किचनको चक्कु निकालेर उसलाई हान्न खोजें । त्यसपछि ऊ भाग्यो ।’ यो पसल…
विदेश, समाचारअस्ट्रेलियाLeaveacomment